Ithebhulethi ye-LG G Pad 5 iya kufika nge-Snapdragon 821 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-LG ilungiselela ukumiliselwa kwethebhulethi yayo entsha ye-G Pad 5 kunye neprosesa endala
I-LG ilungiselela ukumilisela ngokusesikweni ithebhulethi entsha emarikeni. Inkampani yaseMzantsi Korea iphonononga iinkcukacha zokugqibela kwaye ilungiselela umhlaba ukubonisa G-Pad 5, ngokokuba liliphi ilungu lesango XDA-Developers ifunyenwe kuxwebhu olusandula ukuvuza.
Esi sixhobo, nangona siza kufika njengenye eya kukhuphisana nabanye beklasi efanayo, ndiza kubheja kwi-Snapdragon 821, I-SoC ebhengezwe yiQualcomm ngaphezulu kweminyaka emithathu, enomdla kwaye engaqhelekanga, kuba ayisiyonto besiyilindele leyo, kwaye kungaphantsi xa abavelisi namhlanje bezama ukukhetha iichipsets ezintsha zokubaxhobisa kwiitheminali zabo; I-LG yenye yazo, kodwa kubonakala ngathi iya kusebenza ngaphandle kwale thebhulethi intsha.
Uninzi lwee-smartphones ze-2016 zaxhotyiswa nge-Snapdragon 821. Le processor inee-cores ezine, eziyi-Kyro. Kumbuzo, ezimbini kwezi zisetelwe ukubonelela ngesiqhelo nge-2.34 GHz, ngelixa ezimbini ezishiyekileyo zibekelwe isantya sewotshi ye-2.19 GHz.
I-G Pad 5 kuthiwa idityaniswe ne- a I-4 GB ye-RAM kunye ne-32 GB yokugcina indawo. Ngenxa yokuba iROM imfutshane, inokuxhasa ukwandiswa kusetyenziswa ikhadi le-MicroSD. Okwangoku, akukho siqinisekiso solunye uguqulelo lwenkumbulo. Kuya kufuneka silinde ukuba yenziwe igosa ukuba sazi zonke iimpawu kunye neenkcukacha zale thebhulethi inokuthi inikwe kwiimodeli ezahlukeneyo.
I-LG G8X ThinQ: Umlandeli we-LG G8 usesikweni
Iingxelo zangaphambili zibonisa ukuba Ikwanayo ne-10.1-intshi FullHD + isibonisi esine-1,920 x 1,200 resolution kunye ne-16: 10 factor ratio, kunye nesikena somnwe kunye ne-Android 9 Pie efakwe kwangaphambili nge-LG UX njengaleyo yokwenza ngokwezifiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-LG ilungiselela ukumiliselwa kwethebhulethi yayo entsha ye-G Pad 5 kunye neprosesa endala
Ukusuka kubenzi beFruit Ninja kunye neJetpack Joyride: I-Booster Raiders kunye ne-Intanethi yabo ngokuchasene nabadlali aba-4